तपाइँको एप्पल उपकरणहरु को ताजा दर संग सम्बन्धित सबै जान्नुहोस् | म म्याक बाट हुँ
तपाइँको एप्पल उपकरणहरु को ताजा दर संग सम्बन्धित सबै जान्नुहोस्
एउटा यन्त्र किन्दा हामीले ध्यान दिएका कुराहरू मध्ये एउटा भनेको यसको भण्डारण क्षमता र एकै समयमा धेरै कार्यक्रमहरूसँग काम गर्दा यसको गति हो। विशेष गरी म्याकमा, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो साँचो हो कि नयाँ M1 चिपको साथ यी कम्प्यूटरहरूको विकास असाधारण भएको छ। यी नयाँ म्याकहरूको लागि धेरै धन्यवादको बारेमा कुरा गरिएको अर्को कारक कम्प्युटर स्क्रिन रिफ्रेस गर्ने क्षमता र तिनीहरूसँग भएको अधिकतम क्षमता हो। उच्च दर राम्रो छ? तर रिफ्रेसमेन्ट दर के हो? के यो मेरो लागि उपयोगी हुनेछ?। त्यो हामी यस लेखमा व्याख्या गर्न प्रयास गर्न जाँदैछौं।
1 स्क्रिन रिफ्रेस दर के हो?
1.1 ताजा दर को लाभ र हानि
2 यसबाट सावधान रहनुहोस्। रिफ्रेस दर नमूना दर जस्तै छैन।
3 Apple उपकरणहरूमा ताजा दर
3.1 आईफोन and र।
3.2 म्याक कम्प्युटरहरू
स्क्रिन रिफ्रेस दर के हो?
जब हामी रिफ्रेस दरको बारेमा कुरा गर्छौं, हामी मूलतया सन्दर्भ गर्दैछौं गति जसको साथ स्क्रिनमा सामग्री अद्यावधिक हुन्छ। मापन गर्न सकिने सबै चीजहरू जस्तै, हामीसँग यो समय छ कि हामी यसलाई प्रति सेकेन्ड छविहरूमा विश्लेषण गर्दैछौं। यसरी, प्यानलको ताजा दर निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने मापनको एकाइ हर्ट्ज (Hz) हो।
हामीले यस लेखको सुरुमा आफैलाई सोधेका प्रश्नहरू मध्ये एकको जवाफ दिन सक्छौं, यी रेखाहरू भन्दा अलि माथि। स्क्रिनको रिफ्रेस दर जति उच्च हुन्छ, तरलता त्यति नै बढी हुन्छ जसको साथमा यसमा देखिने छविहरू प्रदर्शित हुन्छन्। मूलतया किनभने समयको त्यो ठाउँमा ती प्रत्येक छविहरू बीचमा बित्ने समयमा, हामीसँग एक प्रमुख अपडेट हुनेछ। अब, यो सबै सुन चम्कने होइन। यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि त्यहाँ सम्बन्धित हानिहरूको एक श्रृंखला छ र हामी अब कुरा गर्नेछौं। तर यो अक्सर भनिन्छ कि एक छवि एक हजार शब्दको लायक छ, यहाँ हामी तपाइँलाई एक भिडियो छोड्छौं जहाँ यो व्याख्या प्रदर्शित हुन्छ।
अहिले अधिकांश टेलिभिजन, फोन, कम्प्युटर र स्क्रिन उपकरणहरू, टीतिनीहरू 60 हर्ट्जको रिफ्रेस दरसँग काम गर्छन्। यद्यपि यो सत्य हो कि त्यहाँ कम्प्यूटरहरू छन् जहाँ यी दरहरू चकित पार्ने तथ्याङ्कहरूमा पुग्छन्। खैर, हामीसँग 144 हर्ट्ज सम्मको तथ्याङ्कमा पुग्ने स्मार्टफोनहरू पनि छन्। यो राम्रो कुरा हो किनभने हामीले पहिले नै देखिसकेझैं उच्च रिफ्रेस रेटमा पुग्नु भनेको स्मूद तस्बिरहरू हो र यसरी यसले राम्रो देखिने मात्र होइन, दृश्य थकानलाई पनि कम गर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण छ, एउटा संसारमा जहाँ टेक्नोलोजी र प्रदर्शनहरू बढ्दो महत्त्वपूर्ण र लगभग आवश्यक छन्।
यद्यपि यो सधैं भनिएको छ कि यी उच्च रिफ्रेस दरहरू गेमरहरूका लागि उपकरणहरूमा समावेश छन्, यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि बजार स्थान पहिले नै विस्तार भइसकेको छ। केही वर्ष पहिले र धेरै फोन र ट्याब्लेटहरूले यसलाई पहिले नै समावेश गरिसकेका छन्। हामीसँग आईप्याड प्रो र आईफोन १२ र १३ को उदाहरण छ, उदाहरणका लागि।
ताजा दर को लाभ र हानि
लाज लाग्छ तर सबै फाइदाहरू छैनन् उच्च रिफ्रेस दरहरूमा। तपाईंले समग्र रूपमा सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र अब जब हामीलाई यसको अर्थ थाहा छ, आउनुहोस् हेरौं के हुन्छ।
तरलता र चिल्लोपन। यो स्पष्ट छ। यन्त्रको स्क्रिनको रिफ्रेस रेट जति उच्च हुन्छ, हामीसँग छविहरूको स्मूथनेस र तरलता हुन्छ। यसको मतलब यो पनि हो कि अनुप्रयोगमा परिवर्तनहरू, जब हामी आईफोनमा स्क्रोल गर्छौं वा म्याकको वेबसाइटमा माउसलाई द्रुत रूपमा सार्छौं, वा एक अनुप्रयोगबाट अर्कोमा सार्छौं, धेरै सहज रूपमा गरिन्छ र त्यसैले यो अधिक अनुकूल हुनेछ। ।
उच्च रिफ्रेस दर भनेको हो कम आँखा तनाव र त्यसैले हामी स्क्रिनको साथ अनुभवको अझ राम्रोसँग आनन्द लिन सक्छौं।
उच्च रिफ्रेस दर हुनुको मुख्य हानि निस्सन्देह एक हो त्यो उपकरणमा उच्च ऊर्जा खर्च। यसको मतलब यो हो कि हामीसँग कम स्वायत्तता छ र त्यसैले, आईफोनको मामलामा, यो केवल प्रो मोडेलहरूमा समावेश गरिएको छ जसमा ठूलो ब्याट्री छ।
सबै सामग्री 120Hz रिफ्रेस दरको साथ उपलब्ध छैन। यो 8K सामग्री प्ले गर्न सक्षम भएको टेलिभिजन भएको जस्तै हो। त्यो ठीक छ, तर यदि सामग्री आफैंमा 8K मा छैन भने, हामी टेलिभिजनको क्षमताको बारेमा वास्ता गर्दैनौं।
स्क्रिन जति ठूलो र रिफ्रेस दर जति उच्च हुन्छ, अधिक महँगो उपकरण।
यसबाट सावधान रहनुहोस्। रिफ्रेस दर नमूना दर जस्तै छैन।
हालैका महिनाहरूमा, केही निर्माताहरूले यन्त्रहरू प्रस्तुत गरेका छन् जसको स्क्रिनले स्क्रिन रिफ्रेसमेन्टको 60 हर्ट्जको बाधा नाघेको छ, यसले पनि सन्दर्भ गरेको छ। प्यानल नमूना दर। हामी केहि सैमसंग उपकरणहरूको मामला उल्लेख गर्दैछौं। यो विज्ञापित छ कि यसको स्क्रिन 120 Hz मा रिफ्रेस गरिएको छ र 240 Hz को नमूना दर छ।
हर्ट्जमा पनि मापन गरिएको नमूना दरले स्क्रिन ट्र्याकले इनपुट छुने पटकको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। यसैले, उच्च आवृत्ति मान, कम स्पर्श विलम्बता वा इनपुट लैग, र तरलता र आन्दोलन को हल्कापन को ठूलो अनुभूति। तर हामीले यहाँ कसको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं त्यससँग यसको कुनै सरोकार छैन र भ्रमित नगर्नुहोस्। तार्किक रूपमा, उच्च दुबै दरहरू, राम्रो।
Apple उपकरणहरूमा ताजा दर
एकचोटि हामी उपकरण स्क्रिन रिफ्रेस दरमा पहिले नै "विज्ञहरू" भइसकेका छौं र हामीले यसलाई नमूना फ्रिक्वेन्सीबाट कसरी फरक गर्ने भनेर जान्दछौं, एप्पललाई हेरौं। कुन यन्त्रहरूले उच्च दरहरू प्राप्त गर्छन् र यो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ।
आईफोन and र।
iPhone 12 र 13 मा 120 Hz सम्मको रिफ्रेस रेट भएका स्क्रिनहरू छन्। तर सावधान रहनुहोस्, सबै iPhone मोडेलहरूमा समान दर हुँदैन। यस अवस्थामा, उच्चतम दर उच्चतम मोडेलहरूमा आउँछ। हामीसँग प्रो मोडेलहरूमा 120HZ हुनेछ। ब्याट्री मुद्दा र टर्मिनल को उपयोग को अवधि को लागी मूलतः। यदि तिनीहरूले आईफोन मिनीमा त्यो गुणस्तरको स्क्रिन राखेका थिए भने, यो सम्भव छ कि आधा दिनमा हामीले प्लग खोज्नु पर्ने हुन्छ।
पोडेमोस संक्षिप्त आईफोनको रिफ्रेस रेट यस्तो छ:
iफोन १३ प्रो र आईफोन १३ प्रो म्याक्स तिनीहरूले प्रोमोशनको साथ एप्पलको नवीनतम सुपर रेटिना XDR फिचर गर्दछ, जसको 10Hz देखि 120Hz सम्मको चर रिफ्रेस दर छ। iPhone 13 र iPhone 13 Mini 60Hz प्रयोग गर्दछ।
समान iPhone 12 मोडेलहरूको लागि जान्छ
यो कसरी कम हुन सक्छ, यदि आईफोनमा प्रोमोशन छ, म्याकहरू पनि। तर सबै म्याकहरू नठान्नुहोस्। तिनीहरू कम्प्युटरहरू भएकाले तिनीहरूसँग उच्च रिफ्रेस दरहरू भएका स्क्रिनहरू हुनैपर्छ भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि उच्च दर र ठूलो स्क्रिन, अधिक महँगो। वास्तबमा केहि मोडेलहरूसँग सम्बन्धित 120 Hz डिस्प्लेहरू छन्।
को महान नवीनता मध्ये एक नयाँ १-इन्च र १-इन्च म्याकबुक प्रो यो ठ्याक्कै यो हो। Mini-LED डिस्प्लेले 120 Hz रिफ्रेस दरलाई समर्थन गर्दछ प्रोमोशनको लागि धन्यवाद। एक प्रोमोशन जुन सफ्टवेयर द्वारा सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसकारण, तपाईले पहिले नै इन्ट्युट गर्नुभयो कि हामी त्यो दर फरक गर्न सक्छौं। केहि नयाँ छैन, किनकि हामीले तिनीहरूलाई अन्य अघिल्लो म्याकहरूमा गर्न सक्छौं। यदि तपाईलाई थाहा छैन कसरी, यहाँ तपाईंसँग एक ट्यूटोरियल छ तपाईं कसरी 16-इन्च म्याकबुक प्रो मा रिफ्रेस दर फरक गर्न सक्नुहुन्छ। हामी 60 देखि 47,95 हर्ट्ज सम्म जान सक्छौं।
यद्यपि, 120 Hz को यो फ्रिक्वेन्सी अहिले सबै अनुप्रयोगहरूद्वारा समर्थित छैन। वास्तवमा, सफारी, उदाहरण को लागी, अझै सम्म अनुकूलित छैन। यद्यपि सफारी टेक्नोलोजी पूर्वावलोकन, सफारीको बिटा संस्करण, हो। यो ठ्याक्कै यस ब्राउजरको नवीनतम संस्करण, 135 मा छ, जसमा Apple ले ProMotion को लागि समर्थन पेश गरेको छ।
यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाइँलाई भन्छु। छैन। ProMotion सँग कुनै iMac छैन। तर त्यहाँ हुनेछ।
म तपाईलाई आश्चर्यचकित पार्ने व्यक्ति हुनेछैन, तर तपाईले कल्पना गरे जस्तै, एप्पल वाच यसमा प्रोमोशन स्क्रिन छैन। यो एक धेरै राम्रो रेटिना डिस्प्ले हो, हो। तर यसले 120Hz दरहरू हिट गर्दैन। मलाई लाग्दैन कि मलाई पनि तिनीहरूको आवश्यकता छ।
तपाइँ पहिले नै तपाइँको मनपर्ने यन्त्रहरु को यी पक्षहरु को बारे मा अलि बढी थाहा छ। बाट अब म पक्का छु कि तपाईंले रिफ्रेस दरमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ जब तपाईं नयाँ टर्मिनल किन्न जानुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » तपाइँको एप्पल उपकरणहरु को ताजा दर संग सम्बन्धित सबै जान्नुहोस्
गुणस्तर गुमाए बिना व्हाट्सएप द्वारा फोटोहरू कसरी पठाउने
Mac को लागि सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट वालपेपर